Moms Club Articles
ဒေါကျတာ Mild နှငျ့ အမေးအဖွေ (အပိုငျး - ၁၆၂)
1. အိမျထောငျရှိသညျ ကလေးကမှေးပွီး၁၅ရကျရှိပါပွီ။ ခကျြမကွှသေေးဘူးဆရာရှငျ့။ စိုးရိမျရပါသလားရှငျ့။ ဒီထကျထူးခွားမှု မရှိရငျ စိတျမပူရပါဘူး… ခကျြကွိုးအကွောငျးကိုအောကျက Link မှာရှိတဲ့ ဆောငျးပါးလေးမှာဖတျကွညျ့ပေးပါ...
မေး။ ။ ကလေးနို့မဝတဲ့အခါ နို့ဘူးတိုကျလို့ ရပါသလား။ ဖွေ။ ။ မိခငျနို့ကိုခဏခဏပေးစို့လြှငျ နို့ထှကျမြားလာပွီးကလေးနို့ဝလာမှာပါ။ ကလေးကို...
ဒေါကျတာ Mild နှငျ့ အမေးအဖွေ (အပိုငျး - ၁၆၁)
1. Angel Queen ဆရာရှငျ့သားကွီးက၉လကြျောပါပွီ။ နလေ့ညျခငျးတှအေစာပွဘောမုနျ့တှကြှေေးလို့ရသေးလဲ။ ရှငျ့ကွကျသားဘီစကဈနဲ့အနှဈမပါတဲ့ပါမု့နျ့တှကြှေေးလို့မရတော့လို့ပါရှငျ့။ ဒီအရှယျမှာ ဘာကြှေးရမယျ၊ ဘာမကြှေးရဘူးလို့ အထူးတလညျ သတျမှတျထားခွငျး မရှိပါဘူး…...
အဖျားကြီးပြီးတက်သောကလေးကိုဘယ်လိုပြုစုရမလဲဆိုရင် ဒီကလေးတက်ရသည်မှာအဖျားကြီးလို့ဖြစ်တာကြောင့် အဖျားကျအောင် လုပ်ရပါမယ်။ တက်နေသောကလေးကိုဘေးစောင်းထားပါ။ အန်ဖတ်မစို့အောင်လို့ပါ။ ပူခြစ်နေသောခေါင်းကိုအေးနေသောရေဝတ်နှင့် ခေါင်းမှစပြီးသုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့်...
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း - ၁၆၀)
1. မဝေဝေလွင် ဆရာရှင့်သားလေးက၆လပါ။ အိပ်တဲ့အခါနာရီနည်းနည်းပဲအိပ်ပါတယ်။မိနစ်၂၀လောက်အိပ်ပြီး၃နာရီလောက်မှပြန်အိပ်ပါတယ်။အိပ်တဲ့အားဆေးကျွေးစရာလိုမလား။ဘာဆေးတိုက်ရမလဲသိချင်လို့ပါ။ပြန်ဖြေပေးပါနော်။ အိပ်တဲ့ အားဆေးရယ်လို့ မရှိပါဘူး… ဗီတာမင် စုံလင်တဲ့ အားဆေးတစ်မျိုးမျိုး တိုက်ကျွေးလို့ရပါတယ်… ၃လမှ၆လအထိကလေးအိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးလေးကို...
မေး။ ။ (၆)လထက်ငယ်ပါက ထမင်းကျွေး၍ မရဘူးလား။ ဖြေ။ ။ တချို့မိခင်တွေက ရက်သားကစပြီး ကလေးဝမ်းအေးအောင်...
Moms Club Video
Babimild Fan Photo